Laba jeer ka fikir dhagari inay ku jirto xiriirada qaar ee lamaanaha | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka December 22, 2016	0 336 Views
Harare (Himilonews) – Wada-socoshada lamaanayaashu in badan kama dhigna sawir farxadeed iyo isku qanacsanaan kuwo laga qaato. Sheekooyinka qaar ee ay lamaanaha jaceyl-wadaagta ahina iskula dhaqmaan ma ahan badi kuwo ku idlaada dhamaad farxadeed. Tani waxay nagu dhiirri-gelinaysaa inaan si dhaqsi leh u xukmin xiriirka ka dhaxeyn kara labada qof ee jidka wada-qaada. Taas waa marka aad aqriso qisooyinka dhagarta iyo dibin-daabyada ku lugta leh ee ay iskula dhaqmaan.
Previous: Markuu ardaygu jeclaado macalimaddiisa – si uu u guursado.
Next: Waayeel Masiix ah oo arday Muslimiin ah Qur’anka u dhiga
Malaysia – Kumaankun Cunnooyin bisil ah ayaa la daadiyay maalin walba bishii Ramadaan.